ကလေးနှင့် ကဖင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကော်ဖီ (သို့) လက်ဖက်ရည်ဟာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေခြင်း၊ နိုးကြားစေခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်း စေခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေးနှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို အာရုံကြောဆိုင်ရာ တိုးတက်စေခြင်းဟာ ၎င်းတို့မှာပါ၀င်တဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဖင်းကို အပင်တွေရဲ့ အရွက်နဲ့ အစေ့ကနေ သဘာ၀အလျောက်ရနိုင်တဲ့အပြင် ထုတ်ယူလို့လဲရပါတယ်။ ဗဟိုအာရုံကြောမစနစ်ကို လှု့ံဆော်နိုင်စွမ်းရှိလို့ ကဖင်းကို ဆေးဝါးလို့တောင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ကဖင်းပမာဏနည်းနည်းဟာ လူကိုတက်ကြွ လန်းဆန်းစေပေမယ့် အရမ်းများသွားရင်တော့ ကလေးရောလူကြီးမှာပါ အောက်ပါလက္ခဏာများ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ယောက်ယက်ခတ်ခြင်း
၆။ ရင်တုန် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း
အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာ အတွက်အချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စဉ်းစားရွေးချယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿ နာတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ကဖင်းဓာတ်ကို ဘယ်လောက်ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသလဲ?
ကနေဒါကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အသက် ၄ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိ ကလေးတွေအနေနဲ့ တစ် နေ့မှာ ကဖင်းဓာတ် 45 mg ထိသောက်သုံးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အသက် ၇ နှစ်မှ ၉ နှစ်ကြား ကလေးတွေ အတွက် 62.5 mg ထိ ခွင့်ပြုထားပြီး အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ ကလေးတွေအတွက် 85 mg ထိ သောက်သုံးခွင့်ပေး ထားပါတယ်။ အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ အထက် ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် 1 kg တိုင်းမှာ 2.5 mg နှုန်းနဲ့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး တွက်ကြည့်ရင်တော့ ပေါင် 110 ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကဖင်းဓာတ် 125 mg အထိ သောက်သုံးနိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် US ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း ကနေပြီး ကလေးတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကဖင်းဓာတ်အများဆုံး ဘယ်လောက်ထိ သောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သီးသန့် မှတ်ချက်ပေးထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အသက် ၄ နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက် သတ်မှတ်ချက် မရှိတာကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကဖင်းပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို အသက် ၄ နှစ် အထိ မတိုက်ကျေွးသင့်ပါဘူူး။
ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် USDA National Nutrient Database for Standard အရ
• 30 ml ပါတဲ့ Espresso ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 47-75 mg
• 237 ml ပါတဲ့ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီမစ်တစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 27-173 mg
• 237 ml ပါတဲ့ Latte ၊ Mocha ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 63-175 mg
• 237 ml ပါတဲ့ ဘလက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် (Black Tea)မှာ ကဖင်းဓာတ် 14-70 mg
• 237 ml ပါတဲ့ အသင့်ဖျော်လက်ဖက်ရည် (Tea Mix)တစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 11-47 mg
• 355 ml ပါတဲ့ ကိုကာကိုလာတစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 23-35 mg
• 355 ml ပါတဲ့ ပက်စီတစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 32-39 mg
• 248 ml ပါတဲ့ Red Bull အားဖြည့်အချိုရည်တစ်ခွက်မှာ ကဖင်းဓာတ် 75-80 mg ပါ၀င်ကြောင်း သိရပါတယ်။
၁။ ကဖင်းဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲကထွက်သွားဖို့ ၃ - ၆ နာရီထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညအိပ်ရာ၀င်ခါနီး သောက်မိရင် အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အိပ်ယာထဲ ရှုးပေါက်ချခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။
၂။ ကလေးတွေက ကော်ဖီထက် အချိုရည်တွေ သောက်တာများပါတယ်။ အဲဒီအချိုရည်တွေထဲမှာလည်း ကဖင်းဓာတ် ပါ၀င်တယ်။ အချိုရည်တွေ အသောက်လွန်ရင် ကဖင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေသာမက အ၀လွန်တာ၊ သွားပိုးစားတာတွေကို ပါခံစားရပါမယ်။
၃။ ကဖင်းပါတဲ့ အချိုရည်တော်တော်များများမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေ မပါတတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အချိုရည်တွေ အသောက်များလို့ ဗိုက်တင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို မစားမိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ကဖင်းဓတ်ဟာ ဆီးရွင်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ဆီးခဏခဏသွားပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ကဖင်းစွဲသွားပြီဆိုရင်လည်း တိကနဲဖြတ်လိုက်လို့မရပါဘူး။ အကြောင်းက ရုတ်တရက်ဖြတ်ချလိုက်ရင် စိတ်တိုတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကြွက်သားကိုက်ခဲတာ၊ ယာယီစိတ်ကျေ၀ဒနာ ခံစားရတာတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
၆။ ကဖင်းဟာ နှလုံးနဲ့အာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်တာများတဲ့အတွက် ပမာဏအရမ်းများသွားရင် နှလုံးရောဂါ၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ ရစေပါတယ်။
အချိုရည်၊ ချော့ကလက်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်အချို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေမှာ ကဖင်းပါပါတယ်။
ဒီတော့ ကဖင်းဓာတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် အတိုင်းအဆနဲ့စားပြီး နွားနို့၊ သစ်သီးဖျော်ရည် နည်းနည်း၊ ကဖင်း မပါတဲ့အချိုရည်၊ ကဖင်းမပါတဲ့ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ရေတို့ကိုပိုမို သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၂ဝ.၉.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နာကျင်မှုဝေဒနာဆိုတာ တင်းတင်းကြီး၊ စူးစူးကြီး၊ တစ်စစ်စစ်၊ ထိုးထိုးအောင့်စသဖြင့် မျိုးစုံဖော်ပြလို့ရတဲ့ မကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ တောက်လျှောက်နာနေတာဖြစ်နိုင်သလို နာလိုက် ပျောက်လိုက်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေလိုပဲ ကလေးတွေနဲ့ ဘေဘီလေးတွေမှာလည်း နာကျင်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုပုံ...
၁၉.၉.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း မိုးတွင်းရောက်ပြီဆိုရင် ဘယ်သူတော့ဖြင့် တုပ်ကွေးကွေးပြန်ပြီ စသဖြင့် မကြာမကြာ ကြားရတတ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ခါ ပေါ်လို့လာဆိုတာ တုပ်ကွေးပါပဲ။
>> တုပ်ကွေးပိုး ဘယ်လိုပျံ့နှံ့တတ်သလဲ?
တုပ်ကွေးပိုးကို နှာခေါင်းနဲ့လည်ပင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ မောင်နှမသားချင်းတွေ၊...